Mmiri ọkụ kacha njọ nke Shanghai na afọ 145 gburu mmadụ 4 | Netwọk Mgbasa Ozi
Mmiri ọkụ kacha njọ nke Shanghai na afọ 145 gburu mmadụ 4
Foto - Xinhuanet.com
N'oge ọkọchị n'ọtụtụ akụkụ nke ụwa mercury na thermometers na-arị elu ruo ụkpụrụ dị oke elu, mana mgbe ekpokọtara okpomọkụ na ọkwa mmetọ dị elu, mmetụta okpomọkụ ahụ nwere ike ịdị ogo dị elu.
Na Shanghai (China), ha na-enwe nsogbu ikuku kacha njọ na afọ 145. Site na oke okpomọkụ nke 40ºC, oke iru mmiri na mmetọ, ahụ nwere mmetụta nke 9ºC. Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na 4 ndị mmadụ anwụọla ndụ ha.
El Tuesday Obodo nyere ikike nke atọ nke acha uhie uhie n'afọ n'ihi oke okpomọkụ, n'ihi eziokwu ahụ temometa ruru 40,9 ,C, wee bụrụ nke anọ kacha ekpo ọkụ ụbọchị ebe ọ bụ na a malitere idekọ ndekọ, afọ 145 gara aga. Oké okpomọkụ ahụ akpatawo mfu mmadụ, dị ka akwụkwọ akụkọ si dị n'ógbè ahụ Shanghai kwa ụbọchị.
N'oge a, amara na mmadụ anọ anwụọla, mgbe ọtụtụ n'ime ha, ndị agadi nọ n'okporo ámá, n'ụlọ ha na-enweghị usoro ntụ oyi, ma ọ bụ na-arụ ọrụ mgbe anwụ na-acha ha, na-ụlọ ọgwụ maka okpomọkụ ọrịa strok ma ọ bụ ndị ọzọ pathologies.
Ma ọ bụ na ịnọ n’anwụ zuru oke n’enweghị ihe nchebe n’oge ọkọchị, na karịa, n’oge a ife oku, O nwere ike ime ka anyị ghara ịma onwe anyị, anyị nwedịrị ike ịnwe obi ma ọ bụ iku ume iku ume, akpa ume ma ọ bụ edema ụbụrụ, ọbụnakwa na akụkụ ahụ adịghị arụ ọrụ.
Iji zere nsogbu, ọ dị ezigbo mkpa ịme usoro, nke bụ:
Zere ikpughepụ onwe gị nye anwụ na-acha n'ehihie n'oge kacha ekpo ọkụ.
Chebe onwe gị site na anwụ site na ịkpụ okpu, ugogbe anya anwụ, na mkpuchi anwụ.
Na-a lotsụ nnukwu mmiri, ọ bụrụgodị na akpịrị anaghị akpọ anyị nkụ.
Ma na mgbakwunye, anyị ga- kwụsị okpomoku zuru ụwa ọnụ ọ bụrụ na anyị achọghị ka ndị mmadụ nwụọ n’ihi oke okpomọkụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ebili mmiri ọkụ » Mmiri ọkụ kacha njọ nke Shanghai na afọ 145 gburu mmadụ 4
NASA na-atụpụta atụmatụ dị oke mkpa iji ... Chekwaa Meteorites!
Nnukwu égbè eluigwe na ụwa na ndekọ nke Maracaibo